मंसिर २७, २०७६ प्रकाश अधिकारी
अहिले तपाईं कुन पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ ?
म थाङरा/थाँक्रा नामको आख्यान लेखिरहेको छ । नयाँवर्षको उपलक्षमा शुभकामना स्वरुप पाठक सामु पुर्र्याउने धोको छ ।
थाँक्रा किन पढ्ने ?
यो आख्यान पाठकले किन पढ्नुपर्छ भने अहिले महिलालाई कानूनले वंशाधिकार प्रत्याभूत गरेसँगै महिला र पुरुषमा एक किसिमले अस्तित्व संगर्षको लडाइ गर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ । यसैले यो आख्यानमा त्यस्तो स्थितिलाई कसरी दुवैको अस्तित्वलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय बुझ्न यो पुस्तकले सहयोग गर्नेछ ।
पाठकहरू एकदमै हतारमा छन् । विश्वग्रामले ल्याएको एउटा समस्या हो व्यक्तिमा चरम महत्वकाङ्क्षा । हर मानिस आफ्नै सपनाले निस्सासिएको अवस्थामा फुत्त बाहिर निस्कने बाटो खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भीडलाई एक पाइला भए पनि उछिन्न सिकाउने कला भएको साहित्य पढ्न खोजिरहेका छन् भन्ने लाग्छ है।
आख्यानकार, प्रगति राई
साहित्यलाई पार्टिको मुखपत्र जस्तो सोच्न थालियो । यसले गर्दा व्याक्तिको मनमा आएको कुरा समाजलाई दिन कति आवश्यक छ भनि कम सोच्न थालियो ।
युवा पुस्ता भनेको एक किसिमको अनियन्त्रित भिड हो । भिडमा केहि नयाँ गर्न सक्यो भने ऊ त्यहि भिडको नेता बन्छ । परम्परा तोड्न सकेन भने ऊ जुलुस मात्र बन्छ । युवाहरु अहिले जुलुस छन् । को कसरी नेता बन्छन् भन्ने त उनिहरुको लगनशिलता र फरक चेतनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
कुनै पनि एक पुस्तकले जिवनको पूर्ण आहारा पुग्दैन । यसैले विधालय पनि सात भन्दा धेरै विषय पढाइन्छ । यसर्थ आफनो जिवन चाहाना र भूगोल अनुसारको सुहाउँदो पुस्तक खोजेर पढ्नु उपयुक्त रहला ।
दोष रहित त पानी पनि हुदैन/ औषधि पनि हुदै । यसैले कल्पना गरेर लेखिएको पुस्तकमा धेरै दोषहरू त हुन्छन् नै तर पनि मानिसले हर पाइलामा पुस्तकको कुनै न कुनै हरफले चित्त बुझिरहने खालको पुस्तक लेखियोस जस्तो लाग्छ र म पनि त्यस्तै लेख्नमा प्रयासरत छु ।
शुक्रवार, मंसिर २७, २०७६, ०७:१२:००
चैत्र १७, २०७६ प्रकाश अधिकारी
चैत्र १६, २०७६ प्रकाश अधिकारी